မြန်မာ ၁၁ ဦးပါတဲ့ တောင်ကိုရီယားသင်္ဘောကို ဆိုမားလီးယားပင်လယ်ဓါးမြ ပြန်ပေးဆွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » မြန်မာ ၁၁ ဦးပါတဲ့ တောင်ကိုရီယားသင်္ဘောကို ဆိုမားလီးယားပင်လယ်ဓါးမြ ပြန်ပေးဆွဲ
Posted by ကြယ်လေး on Jan 16, 2011 in World News | 10 comments
ဆိုမားလီးယား ပင်လယ်ဓါးမြတွေဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကနေ အခုထိ သင်္ဘော ၇ စင်းကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြပြီး ဒီအထဲမှာ အများစုဟာ အိုမန် (Oman) ကမ်းလွန်ဒေသမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာပါ။
အခုသင်္ဘော ပြန်ပေးဆွဲမှုကနေ ဆိုမားလီးယား ပင်လယ်ဓါးမြတွေ ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ သင်္ဘော စုစုပေါင်း ၃၁ စင်းရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဓါးစာခံပေါင်း ၆၅၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂရေတပ်က ပြောပါတယ်။
မြန် မာ အ စိုး ရ က တော့ အ ခွန် ကောက် ဖို့ ပဲ သိ တာ
မြန် မာ သံ ရုံး ရှေ့ passport ကိုင် ပြီး သွားသေရင်တောင် အလောင်း တော့ တာဝန်ယူ မှာ မ ဟုတ် ဘူး passport တော့ သိမ်းသွားလိမ့် မယ်
ကြားမိတာကတော့.. သင်္ဘောသားတွေက ပြန်ပေးဆွဲ ခံရရင် ကပ္ပတိန်မှ လွဲလို့.. ကျန်သင်္ဘောသား passport သိမ်းထားတာ က လွဲရင် အကုန်လုံး လွတ်လပ်စွာ သွားလာ ခွင့်ရှိတယ် ပြောပါတယ်။ သင်္ဘောသားတွေက အဲဒီမှာတောင် ပျော်နေကြတယ်တဲ့။ ကြားမိတာ ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီး နိပ်စက်တာတော့ မရှိဘူးတဲ့။
မြန်မာပြည်က Cmompany ကိုရောသိလို့ရမလာဟင်………. ပိစိကွေးမောင်လေးကလည်း ကိုရီးယားသဘောင်္မှာပဲ စိတ်ပူလိုက်တာ…………
နာမည် လေး english လို ပေါင်း ပေး ပါ လား
ကျနော် ရှာ ကြည့်ပေးမယ်
ကိုရီးယား လိုင်း ပေ မယ် သွား တဲ့ လမ်း ကြောင်း ကော တူလား(အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုကနေ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)?
ကို ရီး ယား သား 8 ယောက် လဲ ပါ တော့ ကိုရီးယား သ မ္မတ ကိုယ် တိုင် မြန် မြန် ပြန် လွတ် ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမယ်လို့ သတင်းထဲ တွေ.လိုက်ပါတယ်
သိပ် စိတ် မ ပူ ပါ နဲ့
မြန်မာပြည်က Company Name ကိုပြောတာ………… spelling မှားသွားလို့ပါ ကိုကြယ်လေး……….. ကိုကြယ်လေးသိလားမသိဘူးနော် myanmar က company name ကို………
မြန်မာပြည်က Company Name ထက် လူ နာ မည် ဆို ပို ရှာ ရလွယ် မယ်
အီး………… ဒါဆိုပိစိကွေးကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ သူများတွေသိသွားမှာပေါ့……….. ကိုကြယ်လေးကလည်း……. ပိစိကွေးက ဘယ်သူဆိုတာမသိစေချင်ဘူးလေ…….
samhoshipping တဲ့ Korea က Company Name
ဟုတ်ကဲ့ ……….. ဒီမှာပဲစုံစမ်းလိုက်ပါမယ်နော် ကိုကြယ်လေး……………